Public Speaker Ramesh Prasai को नया रुप भन्छन तराई मेरो हो किन विरोध गर्ने ? | Public 24Khabar
Home Entertainment Public Speaker Ramesh Prasai को नया रुप भन्छन तराई मेरो हो किन...
Public Speaker Ramesh Prasai को नया रुप भन्छन तराई मेरो हो किन विरोध गर्ने ?
लोक सेवा आयोगले सहसचिव र उपसचिव पदका लागि विज्ञापन खुलाएको छ। आयोगले १८२ सहसचिव र ४५६ उपसचिव पदका लागि विज्ञापन खुलाएको हो।उपसचिवमा बढुवाबाट ३८४ र खुलाबाट ७२ जना गरी जम्मा ४५६ जना मागिएको आयोगले जारी सूचनामा उल्लेख गरिएको छ।
जसमध्ये निजामतीतर्फ बढुवामा २६६ र खुल्ला २७ जना गरी २९३ जना माग गरिएको छ। त्यस्तै संसदर्फ बढुवाबाट १६ र खुलामा दुई गरी १८ जना मागिएको छ। स्वास्थ्यतर्फ बढुवामा १०२ जना र ४३ जना खुला गरी १४५ जना मागिएको छ।
सहसचिवतर्फ भने १६३ जना बढुवा र १९ जना खुलातर्फ गरी जम्मा १८२ पदमा विज्ञापन आह्वान गरिएको छ। जसमध्ये निजामतीतर्फ बढुवामा ९५ जना र खुला १० जना, संसदतर्फ बढुवामा तीनजना तथा स्वास्थ्यतर्फ ६५ जना बढुवामा र ९ जना खुला गरी ७४ पदमा विज्ञापन मागिएको हो।
निजामती सेवा, संघीय संसद सेवा तथा स्वास्थ्य सेवातर्फ गरी खुलेको विज्ञापनमा कात्तिक १८ सम्म आवेदन दिन सकिनेछ।दोब्बर दस्तुर तिरेर कात्तिक २५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने आयोगले जनाएको छ। आवेदन आयोगको वेबसाईटमार्फत् भर्न सकिनेछ। आवदेन दिँदा सहसचिवका लागि १५०० शुल्क लाग्नेछ। उपसचिवका लागि १२०० आवेदन दस्तुर लाग्नेछ।
Previous articleला$स जलाउनेको बाबाछोरीको रुवाबासी ! छोरीलाई डाक्टर पढाउने सपना थियो भन्दै धुरुधुरी रोइन आमा Sapana
Next articleभेटियो पुष्पाको अन्तिम भिडियो | चिकेन म:म: मन पराउने Pushpa बिहे गरेको २ महिनामै संसार छोड्न परिन